China Cast vy elektrika rotary airlock valve eo ambanin'ny rivo-doza mpanangona orinasa sy ny mpamatsy |Xintian
Atsofohy vy elektrika rotary airlock valve eo ambanin'ny cyclone mpanangona vovoka
Ny valva Airlock, antsoina koa hoe valva fivoahana, fanariana kintana, cindervalve, dia fitaovana manan-danja ho an'ny rafi-pitaterana pneumatic sy rafitra fanesorana vovoka.
Izy io dia ampiasaina indrindra amin'ny famoahana ny fitaovana tsy tapaka avy amin'ny mpanangom-bokatra sy ny mpanangom-bovoka, ary ataovy azo antoka fa tsy tratran'ny tsindry amin'ny atmosfera ny tsindry anatiny.
Ny valve airlock dia vita amin'ny motera fitaovana, singa famehezana, impellers ary trano rotor izay misy lelany mihodina maro. Izy io dia afaka mamoaka vovoka, potikely kely, flaky na fibre tsy tapaka amin'ny alàlan'ny tsindry amin'ny fitaovana. ampiasaina amin'ny simika, fivarotam-panafody, fanamainana, voamadinika, simenitra, fiarovana ny tontolo iainana sy ny herinaratra orinasa sns.
Anaran'ny vokatra:YJD rotary airlock valve design
Karazana:Faribolana sy efajoro
Zintin'aratra:380V 400V, sns
fahafahana:10-50 m3 / h
Fampiasana vokatra:Fitaovana fanalana vovoka
Ny fitaovana fandefasana andiany YJD-A/B, fantatra amin'ny anarana hoe valva fandoroana lavenona elektrika sy valva hidin-jiro elektrika, dia misy ampahany telo: motera, fihenan'ny planeta tsy mitovy (X) na reducer cycloid pinwheel (Z) ary rotary unloader.Misy andiany roa sy 60 famaritana
Ny flanges efamira fanafarana sy fanondranana dia karazana A, ary ny flanges boribory dia karazana B
Ny fitaovana dia fitaovana fanesorana vovoka, ny fitaovana lehibe indrindra amin'ny fampitana, famoahana lavenona, fanakatonana rivotra ary fitaovana hafa sakafo.Mety amin'ny vovoka sy ny fitaovana granular.Ny haben'ny fametrahana dia mifanaraka amin'ny karazana mpanangom-bovoka rehetra, izay ampiasaina betsaka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fitrandrahana, ny metallurgy, ny indostrian'ny simika, ny varimbazaha, ny simika ary ny sehatra indostrialy hafa.
Motors manokana, toy ny fipoahana-porofo, matetika modulation, hafainganam-pandeha sy ny an-dranomasina maotera, dia azo voaendrika araka ny filan'ny mpampiasa mba hihaona ny mpampiasa'special fepetra.Ny fitaovana ihany koa dia azo karakaraina araka ny filan'ny mpampiasa, toy ny fanoherana ny hamandoana avo, ny fanoherana ny harafesina, ny vy tsy misy pentina, ny lelany malefaka, ny fipoahana-porofo impeller, sns.
Ny fitaovana dia mianjera eo amin'ny lelany ary mihodina miaraka amin'ny lelany mankany amin'ny fivoahana eo ambanin'ny valva fanidiana rivotra. Ny fitaovana dia azo alefa tsy tapaka.
Ao amin'ny rafitra fampitana pneumatic, ny valva airlock dia afaka manidy ny rivotra sy ny fitaovana tsy tapaka.Ny haingam-pandeha ambany amin'ny rotor sy ny habaka kely dia afaka manakana ny fikorianan'ny rivotra amin'ny fikorianan'ny rivotra, ary miantoka ny fanerena rivotra tsy tapaka sy ny fivoahana tsy tapaka ny fitaovana.
teo aloha: Air Manifold Tank Mount Solenoid miasa Diaphragm Pulse Valve
Manaraka: Tranom-borona vita amin'ny vovoka vita amin'ny vovoka avo lenta
Nomex Aramid Filter Bag ho an'ny Asphalt Mixing Plan...
Ny kilasy tsy tantera-drano amin'ny kitapo sivana vita amin'ny polyester roa-pruned dia mahatratra haavo.Izany koa dia miantoka fa ny polyester roa-pruned nahatsapa sivana kitapo dia tsy mora ny hanakana ny tontolo iainana amin'ny hamandoana lehibe, izay mampitombo be ny fanompoana ny fiainana ny sivana kitapo ary mampihena ny fahasarotana ny asa tanana.Mandritra izany fotoana izany, ny ambonin'ny polyester roa-trondro fanjaitra-porofo nahatsapa sivana kitapo malefaka sy ny rivotra permeability tsara, izay miantoka ny toetra o ...
DMF-Z-25 zoro havanana pulse valve Aluminum firaka ...
Famaritana ny vokatra Ny valva pulse dia mizara ho valva pulso zoro havanana sy valva pulso anaty rano.Fitsipika zoro havanana: 1. Rehefa tsy mihetsiketsika ny valva pulse, dia miditra ao amin'ny efitrano decompression ny entona amin'ny alàlan'ny fantsona fanerena tsy tapaka amin'ny akorandriaka ambony sy ambany ary ny lavaka throttle ao aminy.Satria ny fototry ny valva dia manakana ny lavaka fanamaivanana ny tsindry eo ambanin'ny asan'ny lohataona, dia tsy hivoaka ny entona.Ataovy ny fanerena ny efitrano decompression sy ny efi-trano ambany rivotra...
Valve Pulse zoro havanana an-drano
Vovoka mpanangona pulse Solenoid valve ampiasaina amin'ny ind ...
Electrostatic Precipitator Mampiasa, Elektrostatik Precipitator, Fabric Filters Fanaraha-maso ny fandotoana ny rivotra, Electro-Magnetic Pulse Valve, Sivana kitapo indostrialy, Simenitra mpanangona vovoka,